Waa Imisa Lacagta Kooxaha Premier League Ay Illaa Hadda Ka Heleen Tartanka Champions League? Midkee Badan Chelsea & Man City? - Laacib
HomeWararka Champions LeagueWaa Imisa Lacagta Kooxaha Premier League Ay Illaa Hadda Ka Heleen Tartanka Champions League? Midkee Badan Chelsea & Man City?
April 16, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Chelsea iyo Manchester City ayaa lacago ka samaynaya tartanka Champions League ee xili ciyaareedkan oo ay u gudbeen semi-finalka.
Labada kooxood ayaa min £80 milyan oo Gini xaqiiqsaday markii ay kasoo gudbeen wareegga siddeedda ee ay soo reebeen FC Porto iyo Borussia Dortmund.
Chelsea ayaa ah kooxda Ingiriiska ah ee lacagta ugu badan ka heshay tartanka illaa hadda, waxaana qasnaddeeda kusoo dhacaysa lacag dhan £79.8 milyan oo Gini oo ay ku heleen guulihii iyo kulamadii ay soo ciyaareen intii uu tartanka Champions League ee xilli ciyaareedku socday.
Manchester City ayaa iyaduna waxyar ka hoosaysa Chelsea, waxaana Pep Guardiola iyo kooxdiisu ay xoogsadeen £76.8 milyan oo Gini.
In ay usoo gudbeen wareegga siddeedda, waxay koox waliba ku heshay lacag dhamayd £10.4 milyan oo Gini, waxaana haddii ay finalka u gudbaan ay lacagtoodu qarka usii fuuli doontaa illaa £100 milyan, halkan hanashada koobkuna uu kooxda guuleysatay siin doono dhaqaale kale oo badan.
Kooxda u gudubta finalka ayaa heli doonta £13 milyan oo Gini oo kale oo ku kordhi doonta lacagta sare ugu xusan.
Haddii Chelsea ama Man City uu midkood ku guuleysto koobka, waxa kale oo ay heli doonaan £3.5 milyan oo Gini oo kale oo hanashada koobka ah.
Liverpool oo ku hadhay wareeggii siddeedda oo Real Madrid ay ku reebtay ayaa noqotay kooxda saddexaad ee Ingiriis ah ee lacagta ugu badan heshay, waxaanay urursatay lacag dhan £60.9 milyan oo Gini.
Manchester United ayaa kaalinta saddexaad soo gashay oo illaa hadda xaqiiqsatay £50.7 milyan oo Gini kaddib markii ay xalay garaacday Granada ee ay usoo gudubtay semi-finalka Europa League oo ay ku beegantay Roma.
Arsenal ayaa inkasta oo ay wareegga semi-finalka FA Cup timid, waxay haddana joogtaa taxadka hoose ee dakhliga laga helay ciyaaraha Yurub, waxaana kaliya ay kooxdaasi heshay £14 milyan oo Euro, waxayse dhaantaa Tottenham oo urursatay £10.4 milyan oo Gini, halka Leicester City ay £7.7 milyan oo Gini ay ka heshay.
Arsenal iyo Manchester United semi-finalka Europa League ee ay usoo gudbeen waxay ka heleen min £2 milyan oo Gini, laakiin haddii ay finalka tagaan waxa la siin doonaa £3.9 milyan Gini oo kale, halka kooxda koobka ku guuleysatana ay ugu darsami doonto £3.5 milyan oo Gini oo kale.
Halkan kaga bogo lacagaha ay kooxaha Premier League ka heleen tartamada Yurub: